प्रदेश ५ को सरकारमा थपिए तिन मन्त्री, कसलाई कुन मन्त्रालय ? - Lumbini Times
प्रदेश ५ को सरकारमा थपिए तिन मन्त्री, कसलाई कुन मन्त्रालय ?
942 views | लुम्बिनी टाइम्स | सोमबार, ५ चैत।
बुटवल । प्रदेश नम्बर ५ को सरकार विस्तार भएको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार गठनको एक महिनापछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार तीन मन्त्री थपेका छन्। सरकारमा एमालेबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट एक गरि तीन मन्त्री थपिएको हो ।
मन्त्री हुनेमा एमालेको तर्फबाट रुपन्देहीका लिला गिरी र बाँकेकी आरती पौडेल छन् भने माओवादीको तर्फबाट मन्त्री हुनेमा गुल्मीका सुर्दशन बराल रहेका छन् । लिला गिरीले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । आरती पौडेलले भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हाल्ने छन भने सुर्दशन बरालले सामाजीक विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । नव नियुक्त मन्त्रिहरुले आजै प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट सपथ समेत ग्रहण गरेका छन् । सोमबार मन्त्रि परिषद् विस्तार भए पनि पूर्णता भने पाएको छैन ।
यस अघि फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठनसंगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीमा एमालेका बैजनाथ चौधरी नियुक्त भइसकेका छन् ।